Indlu yeendwendwe "Ndwendwela" - I-Airbnb
Indlu yeendwendwe "Ndwendwela"
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguЖака
Indlu encinci netofotofo yeendwendwe "Tyelela" - ekunxweme olusemntla weLake Issyk-Kul ekwindawo esentshona yeCholpon-Ata, eKyrgyzstan.
Indlu yeendwendwe isisombululo esihle kwabo bathanda ukuphumla kwindawo esekhaya, ezolileyo nezolileyo.
Indawo evalekileyo negcinwe kakuhle yendlu ikuvumela ukuba uhlale kwaye uphumle ngoxolo nokhuseleko. Kukho zonke iimeko zokupheka. Egadini kukho izinto ezininzi eziluhlaza, iintyatyambo, kukho igadi, ibala lokudlala.
Eyona nto imnandi ngale ndlu kukuya kunxweme oluhle lwechibi, olukwiimitha eziyi-400 ukusuka endlwini. Imoto emfutshane eya kwi-sanatorium - "Cholpon-Ata State Residence" -2.8 km., "I-Blue Issyk-Kul" 4.1 km. - apho unokufumana iinkonzo zempilo ezininzi.
Indlu yeendwendwe ineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezitofotofo. Indawo yokuhlala - inegumbi elinye, elinokuhlala abantu abane. Onke amagumbi anezindlu zamaplanga zeshawa, amagumbi okuhlambela anamanzi ashushu nabandayo, nto leyo ebaluleke kakhulu emva kokunyuka intaba usiya elunxwemeni. Kukho ne-satellite TV, i-intanethi nayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale.
Iindawo ezikufutshane ezithe cwaka nezizolileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Жака
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cholpon-Ata